Sinyukile esabashone emgwaqeni yaseKZN ngePhasika
BEKUMINYENE kanje eMariannhill Toll Plaza izolo abavakashi abebezochitha amaholidi eKZN sebebuyela ezindaweni abavela kuzona. Isithombe: Bongani Mbatha /African News Agency (ANA)
Simphiwe Ngubane, Nomonde Zondi | April 6, 2021
KUSHONE abantu abangu-47 emigwaqweni yaKwaZulu-Natal ezinsukwini ezine zempelasonto yePhasika.
Lesi sibalo sikhuphukile uma siqhathaniswa nesabantu abangu-40 abashona ngo-2019 ngesikhathi esifanayo. Nyakenye kwashona abantu abayisithupha emigwaqweni ngePhasika kwazise izwe lalingaphansi komvalelandlini esigabeni sesihlanu.
Kuboshwe nabashayeli abangu-1 111 abebeshayela bephuzile. Kukhona umshayeli oneminyaka engu-38 oboshwe ngeSonto ebusuku eScottburgh izinga lakhe lotshwala emzimbeni ebeliphindwe ka-11 kunelamukelekile.
Kuthiwa umshayeli ufukulwe amaphoyisa emkhipha emotweni esangakwazi nokuma. Uzovela namuhla enkantolo.
Kunabashayeli abawu-324 abakhokhiswe inhlawulo ngokushayela ngesivinini, oyedwa wabo uboshwe eMthunzini ehamba ngo-170km/h endaweni ka-120km/h.
Kumiswe izimoto ezingu-14 740 zaseshwa, kwakhokhiswa inhlawulo abashayeli abangu-1 035 ngamacala anhlobonhlobo okuphula imithetho yomgwaqo.
UNGQONGQOSHE wezokuThutha KwaZulu-Natal Unkk Peggy Nkonyeni namaphoyisa omgwaqo behlola idisc yetekisi ukuthola ukuthi ayikaphelelwa yini isikhathi eMariannhill eThekwini izolo Isithombe: Bongani Mbatha /African News Agency (ANA)
Kukhishwe emgwaqweni izimoto ezingu-111 ebezingekho esimeni esigculisayo. Kukhona namatekisi awu-78 ashaqwe amaphoyisa ngokungabinazo izimvume zokuba semgwaqweni.
Zibalelwa ku-2 000 ngehora izimoto ebezidlula eMariannhill Toll Plaza emini emgwaqweni uthelawayeka uN3, abantu ababezochitha amaholidi eThekwini sebebuyela kwezinye izifundazwe.
UNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Peggy Nkonyeni, uthe izingozi eziningi zibangelwe ukuthi abantu bebephuzile futhi beshayela ngesivinini esiphezulu.
UNkk Nkonyeni obephelezelwa usihlalo weSantaco KwaZulu-Natal, uMnuz Boy Zondi benoMnuz Victor Chetty ongumqondisi kwaRoad Traffic Inspectorate, ubekwisivimbamgwaqo senhlanganisela yamaphoyisa omgwaqo naweSAPS eMariannhill Toll Plaza ohlangothini olubheke eGoli izolo. Bekumiswa futhi kuseshwa lonke uhlobo lwemoto nomshayeli wayo.
“Siyabonga ukuthi iningi labavakashi liziphathe kahle. Ngeke sigxeke ukudayiswa kotshwala ngoba isinqumo esithathwe isigungu songqongqoshe ababhekele igciwane iCovid-19. Sigcizelela ukuthi abantu abayikhathalele impilo yabo, uma uthatha isinqumo sokuphuza utshwala, okungcono thola omunye umuntu ozokushayelela,” kusho uNkk Nkonyeni.
UZondi uthe nakuba bekuminyene utshumo emigwaqweni kodwa azibanga khona izingozi ezibandakanya itekisi ezidlule nemiphefumulo yabantu.
Uthe bayahambisana nokumiswa kwamatekisi ashaqwe amaphoyisa wathi hleze lokhu kusindise impilo yabagibeli.
“Sigqugquzela osomatekisi ukuthi bazilungise izimoto zabo nabashayeli bashayele izimoto ezikulungele ukuba semgwaqweni. Akungabekwa imali phambili kunempilo yabantu. Akuthi noma kufika amaholidi azayo zonke izimoto zibe sesimeni esivumelekile ukuba semgwaqweni,” kusho uZondi.